Ukleliswe nosomabhizinisi abasebancane abenza kahle owaseMbali | News24
Ukleliswe nosomabhizinisi abasebancane abenza kahle owaseMbali
PHOTO: supplied USabelo Thusi
UMAXWELL Sabelo Thusi waseMbali e-13 ukleliswe endaweni yamashumi amabili nanye eNingizimu Afrika kosomabhizinisi abasebancane abenza kahle.
UThusi (30) uthi yize inkampani yakhe i2cee Holdings and Traders yenza kahle udlule kokuningi ukufinyelela kulesigaba akuso manje. Inkampani yakhe i2cee Holdings and Traders ifundisa abantu ngokuphathwa kwezimali kanti losomabhizinisi ubuye aphakele ngolwazi lwezezimali kwi
Gagasi FM ohlelweni i-Consumer Affairs nalapho ecebisa khona abantu ngokuphatha imali nange zamabhizinisi.
UThusi ohlabene ngendondo ye-Best youth owned and managed business ku-Myezane BBEE awards ngenyanga ka-Ephreli uthi uthando lwezebhizinisi into akhule nayo.
“Ngikhule nginephupho lokusebenza ngezimali noma bengazi ukuthi ngeke kube uhambo olulula, ngenze izifundo ze Diploma kwi Accounting e-ICESA College ngonyaka ka2003 ngathola iziqu ngase ngisebenza emabhange amaningi namakhulu eNingizimu Africa.”
Utshele i-Maritzburg Echo ukuthi ziningi izingqinamba ake wabhekana nazo ohambeni lwakhe lokusungula ibhizinisi.
“Ngidlule kokuningi ngaphambi kokuthi ngifike kulesigaba eengikusona ngathuka ngabuya nganeno ngesikhathi ngizwa kuthiwa elinye lamaphephandaba azinze eGoli iSowetan liveza izibalo zakamuva kulonyaka zosomambizinisi abasebancane abenza kahle. Ukubona igama lami kuloluhlu kusho kukhulu kumina ngoba ngisebenza kanzima nangokuzikhandla,” kusho yena.
UThusi uthi washiya umsebenzi kwa-Old Mutual Finance ukuze asungule inkampani yakhe ngonyaka ka 2011.
“Kwakungesona isinqumo esilula. Ngangazi ukuthi kuzoqala kube nzima kepha amava ami okusebenza emabhange angisiza kakhulu ngakwazi ukufunda ngokuphathwa kwezimali nokuningi okuphathelene nezezimali nokwakukhulisa ibhizinisi lami.”
UThusi ukwenza kahle kwebhizinisi lakhe kuwumphumela wokusebenzisana kahle nabanye abantu.
Ngibonga abasebenzi esengikwaze ukubavulela amathuba omsebenzi abasebenza ngokuzikhandla ukuyisa ibhizinisi phambili”.
Uthe usenephupho lokuvula amahhovisi kuzo zonke izifundazwe.
“Engingakusho entsheni yase Ningizimu Africa kakhulukazi eyase Mgungundlovu ukuthi ayiyeke ukuvilapha kodwa isukume yakhe imisebenzi. Iningi intsha esethubeni elihle lokuba osomabhizinisi,” kusho yena.
UThusi uthe kulonyaka uzobe eyingigxenye yengqungquthela yosomabhizinisi abawu 48 ngaphansi kwe SAB Tholoane Program ezobe isingethwe eGoli.